Manovanova “produits” : manimba tarehy ve ?
Maro ny antony mahatonga ny vehivavy iray, hanova ny akora ampiasainy amin’ny tarehy. Voalohany, ho an’ireo manana tarehy misy olana ka mitsabo azy. Raha ny tena marina mantsy, rehefa manao “traitement” na mitsabo tarehy iray manana olana, dia tokony hiova arakaraky ny fivoarany ny akora ampiasaina eo amin’ilay hodi-tava. Eo koa anefa ireo tarehy izay tsy manana olana loatra, ary efa manana ny akora mety aminy tsara, saingy nanova ny vokatra atolony ilay laboratoara namoaka azy ka tsy maintsy manaraka na manova izany indray ilay mpanjifa. Ary ankoatra ireo, dia misy koa ireo vehivavy izay misafidy ny hampiasa akora novokarin’ny marika samy hafa hikoloana tarehy ka mampifameno azy ireo.
Ry zareo avy ao amin’ny Lancôme any am-pitan-dranomasina any dia naneho hevitra mikasika ity fanovanovana ny akora ampiasaina ity ihany koa. Mila vokatra maika be ny vehivavy hoy izy ireo, rehefa manandrana akora vaovao. Nilaza anefa izy ireo fa tokony haharitra eo amin’ny 4 hatramin’ny 5 herinandro vao tena hita ny vokatra raha akora fitsaboana hoditra no resahina. Ireo akora manana fiasa haingana indray, dia eo amin’ny 24 ora eo izany vao tena zatra ny hoditra. Nanamafy anefa izy ireo, fa tsy tokony hanimba tarehy ny fanovanovana akora, raha toa ka samy manara-penitra sy mifanaraka amin’ny toetran’ilay hoditra izany. Ankoatra izay dia ilaina ihany koa ny mampifanaraka ireo akora ampiasaina amin’ny mety ho toetry ny andro, ny singa tsy zakan’ny hoditra sy ny singa ilain’ny tarehy….
Fantaro koa fa na sarotiny, marefo na mora tohina aza ny hoditrao dia tsy voarara ihany ny fanovana akora. Ny sokajin-koditrao sy ny filàny ihany no hajaina tsara dia tokony tsy hisy olana na hivadika amin’ny akora hafa indray aza. Na izany aza nefa, raha ireto sokajin-koditra notanisaina ireto, dia tsy tokony hatao fahazarana sy matetika loatra ny fiovaovana sy fanandramana akora betsaka, noho izy ireo marefo ka tsy afaka hifaninana amin’ny fiovaovana akora toy ny karazan-koditra hafa.
Raha manana hodi-tava matanjaka sy tsy mba sarotiny izay kosa ianao dia azo lazaina fa misy mahatsara azy ny fanovanovana akora, saingy tsy atao matetika loatra izany. Voalaza mantsy fa manaitaitra an’ilay hoditra sy mandrisika azy ho velombolo hanamafy ny fiarovana voajanahary ao aminy izany fihetsika izany. “Crème” manara-penitra sy navoakan’ny laboratoara ara-dalàna, miisa 3 na 4 isan-taona eo no azo ampifandimbiasina ampiasaina. Isaky ny hanova akora dia diniho tsarany filàn’ilay hoditra hahafahanao mameno ny hatsarany. Miovaova rahateo ny hoditra dia anjaranao ny mameno azy. Raha miova ny vanim-potoana sy ny toetrandro, dia afaka manova akora ianao. Toy izany koa ny hoe, raha tratry ny tsy fahasalamana na fiovan’ny toe-batana sy ny tsiry mpanentana ; raha handeha hiala sasatra ; … dia ara-dalàna tsara ny manova akora.
Isaorana i Ambinintsoa Rasoanaivo. Estheticienne, Beauty And’Ntsoa Faravohitra. Fifandraisana :